Kooxaha Liverpool iyo Tottenham oo dhibcaha ku qeybsaday garoonka Anfield – Gool FM
Kooxaha Liverpool iyo Tottenham oo dhibcaha ku qeybsaday garoonka Anfield
Dajiye May 7, 2022
(Liverpool) 07 Maajo 2022. Kooxaha Liverpool iyo Tottenham Hotspur ayaa dhibcaha ku qeybsaday garoonka Anfield, kaddib markii ay ku kala baxeen barbardhac 1-1, ciyaar qeyb ka ahayd kulammada horyaalka Premier League.
Qeybta hore ee ciyaarta ayeey labada kooxood ku kala nasteen Liverpool iyo Tottenham Hotspur barbardhac 0-0 ah.
Daqiiqadii 56-aad kooxda Tottenham Hotspur ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta waxaana 0-1 ka dhigay dheesha Son Heung-min, kaddib markii ay caawin kaga timid Ryan Sessegnon.
Laakiin 74 daqiiqo marka ay dheesha mareysay Liverpool ayaa dhalisay goolka barbardhaca kaddib markii uu 1-1 ka dhigay Luis Díaz oo caawinta goolka ka helay saaxiibkiis Thiago.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhammaatay barbardhac 1-1 ah ay ku kala baxeen labada kooxood Liverpool iyo Tottenham Hotspur, Reds ayaa farqi goolal ah waxay dib ugu soo laabatay hoggaaminta horyaalka, waxayna ku dhibco tahay Man City oo bari la balansan Newcastle waxayna leeyihiin min 83 dhibcood.
Brighton oo garoonkeeda ku bahdishay Manchester United kaddib markii ay ka gaartay guul qurux badan
Barcelona oo si dirqi saddexda dhibcood kaga soo heshay Real Betis oo ay booqatay